New 9,7-anụ ọhịa iPad Pro | Esi m mac
New 9,7-anụ ọhịa iPad Pro
Apple webatara ngwaọrụ mbụ nke afọ a: iPhone SE na 9,7-inch iPad Pro. Akpọghị nke ikpeazụ ka anyị nwere ike ịtụ anya iPad Ikuku 3 ma ọ bụ iPad Obere Pro, n'agbanyeghị ịbụ kpomkwem ihe e wedara ala nke 12,9-inch iPad Pro na Apple webatara na ngwụcha afọ gara aga.
N'otu isi okwu ahụ, anyị enweela ike ịhụ ọnụọgụ, ọtụtụ ọnụọgụ na ụfọdụ eriri nylon ọhụrụ maka Apple Watch, mana onweghị ihe ekwuru gbasara mmeghari a tụrụ anya nke Macbook 12 anụ ọhịa. Anyị amaghị ma ọ bụrụ na ụbọchị ole na ole ọ ga - emelite weebụsaịtị ahụ na ụdị ọhụụ ma ọ bụ na anyị ga-echere ọnwa ole na ole.
Site na ihe anyị hụrụ n’oge ngosi ọhụrụ 9,7-anụ ọhịa ahụ iPad Pro integrates otu A9X processor na M9 motion coprocessor, na-akwado Apple Pencil, na-enye anyị ihe ngwọta 2.048 x 1.536 (iPad nke 12,9-inch nwere mkpebi nke 2.732 x 2.048), nwere okwu anọ, dị n'akụkụ anọ nke ngwaọrụ ahụ ma, dị ka ọ dị na mbụ, na-enye anyị ọtụtụ awa 10.
Ọzọkwa, dị ka nwanne nwoke nke okenye, 9,7-inch nke iPad Pro ga-enyekwa anyị keyboard mara mma nke ga-ejikọ iPad site na njikọ Njikọ Smart, nke na-enye ya ike dị mkpa maka ịrụ ọrụ ya. Banyere igwefoto, ọhụrụ iPad Pro nwere igwefoto 12 megapixel nke na-enye anyị ohere ịdekọ vidiyo na 4k ma jiri nwayọ ruo 240 okpokolo agba kwa nkeji, na mgbakwunye na Live Live Photos a ma ama nke iPhone 6s na 6s Plus. N'ebe igwefoto dị karịa nwanne ya nwoke nke okenye nke na-enye naanị 8 megapixels nke mkpebi iji see foto.
Ibu ibu nke ngwaọrụ a 437 grams na ọkpụrụkpụ nke 0,61 cmmgbe 12-anụ ọhịa iPad Pro na-atụle 713 grams na ọkpụrụkpụ nke 0,69 cm.
1 IPad Pro agba
2 9,7-anụ ọhịa iPad Pro ahịa
IPad Pro agba
Dị ka ọ dị na mbụ, iPad ga-adị na otu agba dị ka iPhone: Oghere oghere, ọlaedo bilie, ọla edo na ọlaọcha.
9,7-anụ ọhịa iPad Pro ahịa
iPad Pro WiFi 32 GB: 679 euro
iPad Pro WiFi 128 GB: 859 euro
iPad Pro WiFi 256 GB: 1.039 euro
iPad Pro WiFi + Cellular 32 GB: 829 euro
iPad Pro WiFi + Cellular 128 GB: 1.009 euro
iPad Pro WiFi + Cellular 256 GB: 1.189 euro
Malite na ọnwa 24 na-esote, anyị nwere ike ịmalite idobe ngwaọrụ a na Storelọ Ahịa Apple.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » New 9,7-anụ ọhịa iPad Pro
Apple weputara OS X 10.11.4
Apple kwuputara Ọganihu na ResearchKit